Microsoft Defender ATP antivirus ichauya kuLinux gore rinouya | Linux Vakapindwa muropa
Munguva yegore ra2019 yemusangano weIgnite, Microsoft yakazivisa kuti iri kushanda kupa Linux rutsigiro pane Microsoft Defender ATP chikuva (Yepamberi Kutyisidzira Kudzivirirwa), iyo yakagadzirirwa kuchengetedza zvine mutsindo, kuteedzera zvisina kukanganisika kusagadzikana, uye kuona uye kubvisa zviito zvakashata pachirongwa.
Ipuratifomu iyi inobatanidza antivirus package, sisitimu yekuona kupindwa mukati metiweki, nzira yekudzivirira kubva mukushandiswa kwekusagadzikana (kusanganisira zero-zuva iwo), maturusi ekuzviparadzanisa kwepamberi, maturusi ekuwedzera ekushandisa mashandiro uye nehurongwa hwekuona zviitwa zvine njodzi.
Kufamba uku inouya mushure mekunge Microsoft yazivisa munaKurume wegore rino, shanduko muchiratidzo antivirus. Kare Yaizivikanwa seWindows Defender, asi Microsoft ikaitumidza kuti Microsoft Defender. Iyo kambani yakapawo malware kuchengetedza software yemabhizinesi Mac makomputa kuburikidza neMicrosoft Defender koni. Nayo iko iko kufamba iko kunonzwisisika nekuti kuyedzwa kweMicrosoft Defender ATP yemacOS kwakatotanga mazuva mashoma apfuura.
"Tiri kuronga kupa Microsoft Defender ATP kumaseva eLinux kuti vape dziviriro yakawedzerwa kumakasitoma edu akanyanya," akanyora mukuru wekambani achiwedzera kuti mhinduro ichasvika paLinux muna 2020.
Windows Defender ATP mhinduro-inogoneswa inogonesa masangano kuti aone uye apindure kutyisidziro dze cyber pamasaini Yepamberi Kutyisidzira Kudzivirirwa (ATP) iWindows Defender ficha iyo inoshandiswa mumatemo matatu: kudzivirira, kuferefeta, post-kuona.
Windows Defender yatora matanho ayo ekutanga se spyware muWindows XP. Shure kwaizvozvo, Microsoft yakatsaurira basa rimwe chete muWindows Vista neWindows 7. Kubva Windows 8, software yacho inoshanda seyakakwana antivirus solution.
Kushanda kwemapuratifomu asiri eWindows kuchiri kungogumira nechikamu cheEDR (Endpoint Detection uye Response), inova nebasa rekutarisa maitiro uye kuongorora mashandisiro uchishandisa nzira dzekudzidza dzemuchina kuona zvingangorwiswa, uye zvakare inosanganisira zvinobatsira kudzidza mhedzisiro yekurwiswa uye kupindura zvingangotyisidzirwa.
Nokuda kwayo Microsoft inopokana kuti chishandiso chinouya panguva yakanaka, sezvo Linux yakava nyajambwa wekutyisidzirwa kwe serial, kutyorwa kwedata uye kukundikana kweserver. Kunyangwe kune vakawanda ichiratidzika se "runyoro rwakanyanya", Microsoft haigadzi kufamba nekuti, sezvo mazhinji eayo akagadzira maererano neLinux, anotarisana zvakanyanya kusimudzira chikuva cheAzure.
Pamusoro peMicrosoft Defender ATP inosunungurwa muchimiro chekunyoreswa kwemwedzi kumakambani, inova iyo "Microsoft Defender ATP E5".
Mupfungwa iyi, hazvishamise kana tikatora nguva yekuita zvekudzokera kumashure. Kusvikira kota yekupedzisira ye2018, Linux neWindows Server zvaipesana neMicrosoft Azure.
Iwo maviri masystem anoshanda zvakaenzana akagovana chaiwo michina inomhanya papuratifomu yegore reMicrosoft, asi dzimwe nguva Linux yakatora uye ichi ndicho chiitiko chakajairika. Iyi mamiriro ezvinhu anogona kuoneka semhedzisiro yezvakatanga nekupa Azure Linux rutsigiro, kubvumidza dzakasiyana siyana dzeLinux kutsigirwa papuratifomu yegore nekufamba kwenguva.
Nhasi, vanobatana neMicrosoft vari kupa Linux mifananidzo paAzure Marketplace uye iyo kambani iri kuenderera mberi ichishanda pamwe nenharaunda dzakasiyana dzeLinux kuwedzera runyorwa rwekugovera kunoenderana neayo gore chikuva. Zvichakadaro, kana kugovera kusingawanikwe paAzure Marketplace, inogona kusanganisirwa nekutevera mirairo yakapihwa neMicrosoft yekugadzira uye kurodha pasi dhisiki rakaomarara rine Linux yekushandisa.
Microsoft Defender ATP yeLinux yakarongerwa kuvhurwa gore rinouya uye vhezheni yekutarisa yakaratidzwa svondo rapfuura kumusangano weIgnite 2019. Chigadzirwa chekupedzisira chichawanikwa kuruzhinji na2020.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kutarisa ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Microsoft Defender ATP antivirus iri kuuya kuLinux gore rinouya
Gava rinoda kuiswa kunochengeta danga rehuku.
Handina chivimbo neB B. Gate …… Iye ngozi octopus
Pindura kune debjor